Grooved Fittings များကို ထုတ်ကုန်နှစ်ခုတွင် ရနိုင်သည်-
(1) ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက် ပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ တင်းကျပ်သော အချိတ်အဆက်များ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အချိတ်အဆက်များ၊(၂) ချိတ်ဆက်မှုကူးပြောင်းခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည့် ပိုက်အချိတ်အဆက်များသည် တံတောင်ဆစ်၊ တီရှပ်၊ လေးလမ်း၊ လျှော့ပိုက်၊ မျက်မမြင်ပန်းကန်ပြား စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
အကြမ်းထည် ပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အလိုအလျောက်ဖြန်းစက်စနစ်၏ ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်အရ၊ စနစ်ပိုက်၏ချိတ်ဆက်မှုသည် groove joint သို့မဟုတ် thread နှင့် flange connection ဖြစ်သင့်သည်။စနစ်အတွင်းရှိ အချင်း 100mm နှင့် ညီမျှသော သို့မဟုတ် ကြီးသော ပိုက်များကို အလျားလိုက် သို့မဟုတ် အပေါက်ဖောက်ထားသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများဖြင့် အပိုင်းပိုင်း ချိတ်ဆက်ရမည်။ဂရု...
21-07-10 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Pipe Roll Groove "A" Dimension - "A" Dimension သို့မဟုတ် ပိုက်စွန်းမှ groove မှ အကွာအဝေးသည် gasket ထိုင်ခုံနေရာကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ဤဧရိယာသည် မျဉ်းကြောင်းများ၊ ခန့်မှန်းချက်များ ( weld အပါအဝင် ...
grooved couplings များကို တပ်ဆင်သည့်အခါ သတိထားရမည့်ကိစ္စများ
(1) ကုပ်၏တပ်ဆင်အရည်အသွေး၊ အထူးသဖြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကုပ်၏တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးသည်အထက်ဖော်ပြပါလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ၊ ပိုက်ပစ္စည်း၊ ပုံသဏ္ဍာန်အရွယ်အစား၊ နော်ဇယ်ပုံပျက်ခြင်း၊ ဖိအား groove အရည်အသွေး၊ Clamp ၏ အရည်အသွေးနှင့်...
grooved pipe fittings များကို သာလွန်စွာ တံဆိပ်ခတ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်း
ရော်ဘာတံဆိပ်ခတ်ကွင်းနှင့် ကုပ်ကိရိယာများ၏ grooved pipe fittings များတွင် ထူးခြားသောအလုံပိတ်တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းတစ်ခုပါရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ တူးထားသောပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အတွင်းလွှာတွင်ရှိသော ရော်ဘာတံဆိပ်ခတ်ကွင်းကို ချိတ်ဆက်ထားသောပိုက်၏အပြင်ဘက်တွင် ထားရှိထားပြီး ၎င်းနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။ pre-rolled groove ။Th...
ဂဟေဆက်ခြင်းအတွက် grooved pipe fittings များ၏ ထိခိုက်မှု
grooved pipe fittings များကို ချိတ်ဆက်ရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုစီနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နည်းလမ်းများ ကွဲပြားသော်လည်း စက်ပစ္စည်းအတွက် အန္တရာယ်အရှိဆုံးမှာ အောက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍများတွင် အဓိကအားဖြင့် ထင်ရှားသည့် ရိုးရာဂဟေဆက်နည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးများသည်ဟု အယ်ဒီတာက ယုံကြည်သည်- 1. မီးခိုးငွေ့ ညစ်ညမ်းမှု W...
Weifang Fangzi သည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ တစ်ခုတည်းသော "China Groove Pipe Fittings Industry Base" ကို ဤသတင်းစာမှ သတင်းများ (သတင်းထောက် Wu Xiaoqiang၊ သတင်းထောက် Liu Huaqiang၊ သတင်းထောက် Liu Huaqiang နှင့် Lu Xuanlong) မှ "16th China Foundry Associ" တွင် သတင်းထောက်အား အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ .။
အကြမ်းခံထားသော ပိုက်တပ်ဆင်ပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
Grooved fittings များသည် ကြီးမားသော ပိုက်လိုင်းများတစ်လျှောက် ကြီးမားသော တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ကြီးမားသော ပိုက်စနစ်များကို လျင်မြန်စွာ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။၎င်းတို့သည် ထည့်သွင်းရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပြန်လည်လမ်းကြောင်းပြုလုပ်ရန် အလွန်စျေးမကြီးပါ။အံဝင်ခွင်ကျရှိသော အချိတ်အဆက် အိမ်ရာသည် bolt pad နှင့် အပြိုင် လျှောကျသွားသည်။...
Groove pipe fittings စနစ်နည်းပညာ
1. ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး တပ်ဆင်ရန်နေရာ လိုအပ်ချက်သည် သေးငယ်သော်လည်း ဂဟေခတ်အနားကွပ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ groove ချိတ်ဆက်မှုထုတ်ကုန်၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ပိုမိုကျစ်လျစ်ပြီး တပ်ဆင်ရန်နေရာ လိုအပ်ချက်မှာ သေးငယ်သည်။အရွယ်အစားကြီးမားသော pipin များကို ဂဟေဆက်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည်...
ဇန်နဝါရီ 16-19 ရက်၊ 2020 တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း (Dubai) International Fire Protection Exhibition INTERSEC တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘေးကင်းရေး မီးဘေးကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏ အကြီးစားပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။...
Shandong Zhihua Pipe Industry/Huabao Machinery Lean Promotion Project ၏ နှစ်လယ်အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
2020 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 28 ရက်နေ့တွင် Zhihua Pipe Industry/Huabao Machinery ၏ Lean Promotion Project ပထမအဆင့် နှစ်လယ်အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။Zhang Wei၊ Zhihua Pipe Industry/Huabao Machinery ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အဆင့်တိုင်းတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု...
Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd. နှင့် Weifang Huabao Machinery Co., Ltd. တို့၏ Lean Project Kick-off Meeting ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
2019 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 8 ရက်နေ့တွင် Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd. နှင့် Weifang Huabao Machinery Co., Ltd. မှ "Lean Promotion Phase I Project Launch Meeting" ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd., Weifang Huabao Machinery Co., Ltd. ဥက္ကဌ Zhang Zhihua, ...
Fangan ခရိုင်၊ Fangzi ခရိုင်၊ Weifang မြို့၊ 262123 တရုတ်နိုင်ငံ။